Vehivavy efatra malaza tamin’ny revolisiona Syriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2018 13:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 한국어, Ελληνικά, русский, عربي, 日本語, Nederlands, Italiano, English
Fadwa Suleiman, mpiantsehatra avy any an-tanànan'i Aleppo, iray amin'ireo endrika mora fantatra indrindra tao Syria nandritra ny taona maro. Tamin'ny taona 2011, raha nipoaka ny hetsi-panoherana tao an-tanànan'i Homs, nanjary olo-malazan'ny revolisionera izy. Voahodidina mpanao fihetsiketsehana, maneho fifanoherana mahery vaika amin'ny fisehoany mahafinaritra nandritra ny volana vitsy talohan'izay ny endrik'i Fadwa miaraka amin'ny volo fohy sy keffiyeh Palestiniana. Toa hita samihafa aza ny feony malefaka izay nanintona ny taranaka Syriana manontolo satria niaka-peo izy, ary farina tamim-pitiavana mba hanentana ireo olom-pirenen'i Homs, mangataka azy ireo hanohy ny hetsika tsy fankatoavam-bahoaka izay niaingàn'ny fifaharana manoloana izay hitan'ny maro ho fitomboan-kerin'ny fitondrana jadona. Ny zava-misy hoe izy—sy ny filoha Syriana Bashar Al-Assad—samy ao amin'ny sekta Alawite no nihaika ny fitantaràna ofisialy mikendry hanaratsy ny hetsi-panoherana. Nandositra nankany Frantsa i Fadwa nony farany taorian'ny nanambaran'ny manampahefana ny fikasan'izy ireo hikaroka sy hisambotra azy maty na velona.
Razan Zeitouneh dia mariky ny Rariny miaraka amin'ny renintsoratra R ho an'ireo Siriana nilaozana tamin'ny anjarany. Mpisolovava iray fanta-daza momba ny zon'olombelona, ​​miaro ireo gadra politika izy ary nanangana ny Fikambanan'ny Zon'Olombelona ao Syria. Mandrindra ny Vaomieran'ny Fiarahamiasa eo an-toerana ihany koa i Razan. Nahatonga azy ho lasibatry ny fitondran'i Assad sy ireo vondrona ekstremista izay niezaka hisoavaly ny fitroaram-bahoaka ny asany. Raha mieritreritra ny ho avin'ny Minisitry ny Fitsarana Syriana ny Syriana, matetika voatonona ny anaran'i Razan.
Iray amin'ireo anarana an'arivony ao amin'ny “lisitry ny fahafatesana” malaza ratsy ilay mpianatra Lama Albasha, lisitra izay misy ireo novonoina sy maty nampijaliana tany amin'ny fonjam-panjakana. Fonja toy ny Saydnaya, izay nofaritan'ny Amnesty International ho toy ny ” trano famonoana olona”. Nahafantatra ny fianakavian'i Lama, tamin'ny fijerena ny lisitry ny fiarovana ankapobeny tamin'ny 31 Jolay 2018, fa efa maty tany an-tranomaizina taona maro lasa izy, voalaza fa noho ny aretim-po.
Navoaka voalohany tamin'ny teny Espaniola tao amin'ny El Diario ity lahatsoratra ity. Nadika tamin'ny teny Anglisy izy ary nampiana fanazavana fanampiny avy amin'i Joey Ayoub.